I-Bitwarden umphathi omuhle kakhulu we-password yomthombo ovulekile okufanele uzame | Kusuka kuLinux
Njalo uma ubhalisa esithangamini, iwebhu noma udale i-akhawunti ye-imeyili noma ufinyelele kwinethiwekhi entsha yokuxhumana nabantu, kufanele wenze umsebenzi wokwabela iphasiwedi abaningi abavame ukukhetha ukuthi kube lula ukukhumbula okukodwa noma esimweni esibi basebenzise efanayo naleyo abayisebenzisa ku-akhawunti yabo ye-imeyili.
Ngokunikezwe lokhu, izinhlelo zokusebenza eziningi neziphequluli zewebhu zifake i-generator yephasiwedi ukuze abasebenzisi basebenzise amaphasiwedi "abuthakathaka", kepha inkinga yokusebenzisa i-generator ilele ekutheni kufanele ugcine iphasiwedi eshiwo ukuthi kwabaningi kunzima ukukhumbula.
Kulokhu kukhona abaphathi be-password ezibhekele ukugcina imininingwane yokungena yamawebhusayithi owavakashelayo ngisho nezinye izinhlelo zokusebenza kudeskithophu yakho.
Kungakho namuhla sizokhuluma ngeBitwarden, okuyi imenenja yephasiwedi yomthombo ovulekile emahhala futhi ikakhulukazi evulekile (I-Linux, Mac, Windows, Android, iOS) esebenza futhi njengesandiso kuziphequluli zewebhu ezidume kakhulu ngakho-ke ifana kakhulu nezixazululo ezidumile zokuphathelene njengeLastpass ngokugcina iphasiwedi yakho ku-database yamafu evikelwe.
Izici zayo eziyinhloko Okungaqokonyiswa kusuka kulo mphathi we-password yilawa:
IBitwarden igcina wonke amaphasiwedi nemininingwane yedatha endaweni yokuphepha evikelekile futhi ebethelwe. Ukubethela kugcinwa kuphephile ngokushiswa okunosawoti nokubethela okuncane kwe-AES-256.
IBitwarden isebenza kuzo zombili iFirefox neGoogle Chrome kuLinux noma ngohlelo lwe-Linux lomdabu olungafakwakali.
Kungenzeka ukuthi ubambe i-server yakho ye-Bitwarden password uma ungathembi isevisi yefu elungiselelwe ukuphatha amaphasiwedi wakho nedatha ngokuzenzakalela.
IBitwarden ine-generator eyakhelwe ngaphakathi evikelekile ukukusiza ukugqashula imikhuba emibi yokusebenzisa kabusha amaphasiwedi.
Ngaphandle kwalokhu, okuhamba phambili kubo ukuthi iBitwarden ayisebenzi kuphela esipheqululini sewebhu ngokusebenzisa isandiso seFirefox noma i-Chrome, kepha futhi inohlelo lokusebenza lwendabuko lwe-Linux.
Ungayifaka kanjani iBitwarden kuLinux?
Abathuthukisi be-Bitwarden password manager banikela ngamaphakeji ahlukile ukuze bakwazi ukuyifaka ku-Linux, kungaba yiphakethe lesikweletu, i-rpm, i-flatpak noma nge-AppImage.
Ngakho-ke ngecala le- labo abasebenzisa ukusatshalaliswa ngokusekelwa kwamaphakheji wedeb, ungathola inguqulo ezinzile yakamuva yeklayenti leBitwarden kusuka kuwebhusayithi yayo esemthethweni esigabeni sayo sokulanda noma uma uthanda ungayilanda ngomyalo olandelayo ovela esigungwini:
Ngemuva kokulanda, ungafaka iklayenti ngomphathi wakho wephakheji owuthandayo noma kusuka ku-terminal nge:
Manje kulabo abasebenzisa uhlelo olunokuxhaswa kwe-rpm Iphakheji okufanele bayisebenzise yilokhu okulandelayo:
Futhi bafaka nge:
Manje, ukufaka kusuka kufayili yohlelo lokusebenza esingakulanda nge:
Kwenziwe ukulanda Kufanele sinikeze izimvume zokwenza amafayela nge:
Futhi bagijima nge:
Enye indlela kufanele sifake iBitwarden cishe kukho konke ukusatshalaliswa kwe-Linux kwamanje, kungosizo lwamaphakeji weFlatpak.
Ngalokhu kumele sibe nokusekelwa ukuze sikwazi ukufaka izinhlelo zalolu hlobo ohlelweni. Ukwazi ukuthi unokwesekwa kweFlatpak kusistimu yakho, vele uvule ukuphela bese usebenzisa umyalo olandelayo kuyo:
Futhi ngomumo ngalo, uzobe usuvele ufake uhlelo kusistimu yakho.
Mane nje useshe uhlelo ngaphakathi kwemenyu yakho yohlelo lokusebenza ukuze uyivule kusistimu yakho.
Uma ungatholi, ungaqalisa uhlelo lwakho kusistimu yakho ngomyalo olandelayo ovela esigungwini:
Manje uma ufuna ukususa lolu hlelo lokusebenza, vele ususe ifayili lokulanda elilandiwe noma uma ulifakile ngeFlatpak vele usebenzise lo myalo ku-terminal:
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Bitwarden umphathi omuhle kakhulu we-password yomthombo ovulekile okufanele uzame